Ndị dike akụkọ ifo – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike – Gam akporo Ndị aghụghọ Atụmatụ
Ndị dike akụkọ ifo – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Ndị dike nke Mythic Might ga-ebuga gị n'ime ụwa efu dabere na akụkọ ifo na akụkọ ifo ndị ọwụwa anyanwụ.
N'egwuregwu ahụ,onye ọkpụkpọ bụ onye na-achọ anwụghị anwụ nke na-ezute ndị dike dị omimi, na-anakọta ọtụtụ ndị enyi njem, na-akpụkwa ngwa-agha dị nsọ iji zụọ mmụọ na ịchụda mmụọ ọjọọ. Enwere akụkọ akụkọ bara ụba n'oge niile, na ị ga-emerịrị ọtụtụ ihe ịma aka iji nyochaa omimi ya.
Mmụọ na-agafe n'ime ihe niile!
Ahụmịhe imikpu ụdị ọmarịcha chivalrous
A na-eme ụwa egwuregwu niile n'ụdị ọmarịcha ụdị China, nke mere na ị nwere ike tufuo onwe gị kpamkpam na ndabere na agwa. Ihe niile sitere na eserese zuru oke, ụdị animated, na UI imewe — inch ọ bụla nke egwuregwu na-ejupụta na ezigbo nka ndị China. Mma niile nke ewepụtara na uri ndị China oge ochie na-adị ndụ n'ime ụwa ihe omimi a dị omimi!
Enweghị Ntọala ịkụ aka na-agwụ ike & Echefu ọgụ
Hazie ndị otu dike gị, ziga ha n'agha, na-ekiri gị dike na-alụ ọgụ na-akpaghị aka maka gị!
Nwee obi ụtọ n'ọgụ izu ike ka ị na-emeri Epic Gear na Legendary Heroes!
Ọbụna mgbe ị na-anọghị n'ịntanetị, ị ga-enweta nsonaazụ mara mma!
Cool Skins Stats dị iche
Nku mara mma, mmetụta ìhè na-egbuke egbuke — nye ndị dike gị ụdị ọhụụ ọhụụ niile ma mepụta oriri ahaziri maka anya! Nke ọ bụla nwere ọdịdị pụrụ iche, and unlocking skins will also mepee jaw-dropping skill effects and stats. Jiri mmetụta ọgụ ndị a dị egwu were egwu egwu nke ị na-agaghị agwụ agwụ n'ọgbọ agha!
Atụmatụ nke ọtụtụ ohere iji merie
Ihe karịrị otu narị ndị dike, stats isii na-emegiderịta onwe ha, na klaasị ise nwere specialties nke ha. E nwekwara 9 Talents nwere mmetụta dị iche iche ịgwakọta na dakọtara ka masịrị gị. Enweghị otu ahịrị OP. Ọ bụrụhaala na ị nwere ike jiri akọ wuo ahịrị gị, ị nwere ike jiri aghụghọ gị tipịa asọmpi ahụ!
Ụdị PVP dị iche iche na-ama onwe gị aka
N'agbanyeghị mgbe ma ọ bụ ebe, ị nwere ike ịnụ ụtọ ọgụ PVP. Ị ga-arịgo elu nke Empyrean Tower, ma ọ bụ Asọmpi Summit, ma ọ bụ gaa n'ihu na Worldwide Top 32 na Sky Arena? Gị na ndị enyi gị dịrị n'otu, merie ndị mmegide, gosikwa onwe gi! Ị nwekwara ike ijikọ ndị otu na-alụ ọgụ na Sect War. Kpọkọta ndị enyi gị maka agha ugbu a!
BIKO RỤBA AMA! Ndị dike nke Mythic Might bụ n'efu ka ibudata ma kpọọ, Otú ọ dị, Enwere ike ịzụta ụfọdụ ihe egwuregwu maka ezigbo ego. Ọ bụrụ na ịchọghị iji njirimara a, biko guzobe nchedo okwuntughe maka ịzụrụ ihe na ntọala nke Ụlọ Ahịa Google Play gị. Ọzọkwa, n'okpuru Usoro ọrụ na amụma nzuzo, ị ga-enwerịrị opekata mpe 12 afọ igwu egwu ma ọ bụ budata.
Atiya: Ndị aghụghọ na mbanye anataghị ikike ma ọ bụ Atụmatụ Mkpado: CheatsHack, Ndị dike, Akụkọ ifo
← Endless Nightmare 2: Hospital – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike Ocean Blast – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike →
456 Imposter Survival Game – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Mahjong Club – Solitaire Game Cheats&Mbanye anataghị ikike
Tropical Merge – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Mahjong Tour: Witch Tales – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike